Maleeshiyo hubaysan oo dad shacaba ku laysay Gobolka Hiiŕaan | Berberanews.com
Home WARARKA Maleeshiyo hubaysan oo dad shacaba ku laysay Gobolka Hiiŕaan
Maleeshiyo hubaysan oo dad shacaba ku laysay Gobolka Hiiŕaan
Beledweyne (Berberanews) – Wararka naga soo gaadhaya deegaanka Kabxanleey oo dhinaca Waqooyi kaga beegan magaalada Baledweyne, ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay weerar Maleeshiyaad hubeysan ku qaadeen dad beeraleey ahaa oo ku sugnaa deegaankaasi.
Weerarka ka dhacay deegaanka Kabxanleey, ayaa sheegaya inay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaadhay dadka beeraleyda ahaa ee lagu soo qaaday weerarka gaadmada ahaa sida ay warbaahinta u sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaankaas.
Dad goobjoogayaal ah, ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in weerarka lagu dilay ilaa 5 ruux oo ka mid ahaa beeraley ku guda jiray tacbashada beerahooda, islamarkaana tiro kale oo ku dhaawacantay weerarkaasi loo soo qaaday Isbitaalka weyn ee magaalada Baledweyne.
Lama oga sababta rasmiga ah ee keentay weerarkan shanta qof ee ka mid ka ahaa dadka beeraleeyda Kabxanleey lagu dilay kuwa kalana lagu dhaawacay, inkastoo dhowr jeer oo hore weeraro ceynkan oo kale ah lagu dilay dad beeraleey ahaa oo ku noola deegaanka Kabxanleey oo dhanka Waqooyi kaga beegan Baledweyne.
Wararkii ugu dambeeyay ee laga heleyo deegaankaasi, ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaqyo iyo abaabulo la xidhiidha xisad dagaal laga dareemayo deegaanka Kabxanleey ee gobolka Hiiraan.
Previous articleSomaliland oo codsatay sii daynta 5 qof oo ku eedaysan faafinta Kiristaanka
Next articleCristiano Ronaldo oo ku biiray Manchester United